eNasha.com - राजतन्त्रको वकालत गर्नेलाई जनताको जिम्मा
Home» City Life »Updates
राजतन्त्रको वकालत गर्नेलाई जनताको जिम्मा
- सरोज अधिकारी
जनआन्दोलन २०६२।०६३ को मर्म र भावना विपरीत राजा ज्ञानेन्द्रको नूनको सोझो गर्न कम्मर कसेर लागेका विभिन्न पार्टी भित्रका राजावादी भनेर चिनिने व्यक्तिहरुबाट राजा जोगाउन खोज्नु कुनै नौलो कुरा होइन । यो सबैले सजिलै बुझ्न सक्ने कुरा हो । तर यी राजाका हिमायतीहरुले शीर उठाएर बोल्ने हिम्मत कसरी गरे ? यो चाहिँ सोचनीय विषय छ । यसको मतलब नेपाली जनताले के बुझ्नु पर्दछ भने राजाले अप्रत्यक्षरुपमा षडयन्त्र गरिरहेका छन् भन्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुको विचार आइरहेको बेला अचानक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट राजाका वरिपरि राष्ट्रसेवकहरु छन्, माओवादीले तिनीहरुसँग एकता गर्दै जान सक्नेछ भन्ने विचारले नेपाली राजनीतिमा ठूलै भूँइचालो मच्चायो । माओवादी र राजाबीचको सम्बन्ध भित्री रुपमा अति नै गहिरो रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण स्वयं प्रचण्डको भनाइबाटै प्रष्ट हुन्छ । उनले राजाका वरिपरिका राष्ट्रसेवक भनेर कसलाई भन्न खोजेका हुन् ? त्यो कुरा माओवादीले प्रष्ट पार्नु पर्दछ । अहिले दरबारिया व्यक्ति भनेर तत्कालीन ज्ञानेन्द्र सरकारका उपाध्यक्ष र मन्त्रिपरिषदका सदस्य र त्यसका मतियारहरु भनेर चिनिन्छन् । के तिनै व्यक्तिहरु नै प्रचण्डका राष्ट्रसेवक हुन् त ? माओवादीले भनेका कुन तहका, कुन-कुन व्यक्तिहरु राष्ट्रसेवक हुन् ? यो कुरा माओवादी नेतृत्वले नेपाली जनतालाई प्रष्ट पार्नु पर्दछ । जनआन्दोलनका सहयात्री पार्टीलाई राजा जोगाउन लाग्यो भनेर आरोप लगाउने, आफूचाहिँ राजावादी राष्ट्रसेवकहरुसँग कार्यगत एकता हुन सक्छ भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने यो कस्तो राष्ट्र सेवा हो ? यो कस्तो जनसेवा हो ? यही थियो जनआन्दोलनको मर्म र सहिदहरुको सपना ? यसमा माओवादीको नियतमाथि जनताले शंका गर्ने ठाउँ छ कि छैन ? अहिले यी प्रश्नहरु नेपाली जनताहरुमा उठिरहेका छन् । हुन त माओवादीले शाही नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेललाई अन्तरिम सांसदमा नियुक्त गरेर यसको उदाहरण दिइसकेका छन् । उनी शाही सेना भएर राजाका नजिकका पनि हुन् र राष्ट्रसेवक पनि हुन् । अब त्यस्ता राष्ट्रसेवक कति आउने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइपछि यसले नेपाली राजनीतिमा कस्तो असर पार्‍यो भन्ने विषयमा नेपाली युवा विद्यार्थीहरुको विचार अलिकति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने बहस कार्यक्रम हेर्ने मौका पाएको थिएँ । कार्यक्रममा तीन मुख्य पार्टी विद्यार्थी नेताहरुसँग विचार लिइएको थियो । त्यसमा माओवादी विद्यार्थी नेता हिमाल शर्माले प्रचण्डको विचारबाट देशमा उब्जन सक्ने राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा भन्दा पनि अध्यक्षको बचाउमा बढी केन्द्रीत भएको देखियो । अध्यक्षले जे बोले पनि ठीक छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति बलजफ्ती व्याख्या गर्न खोजिएको पाइयो । यसको मतलब माओवादी आफ्नो विचारमा अडिग नभइ विचलनतिर लागेको प्रष्ट हुन्छ । किनकी एकातिर देशमा गणगन्त्र चाहिन्छ भन्ने, संविधानसभा चुनाव हुनपर्छ भन्ने हुन नदिने, अर्कातिर दरवारियासँग एकता हुन सक्छ भनेर अर्को अन्योल सृजन गर्ने । यस्तो राजनितिबाट जनताले माओवादीबाट के अपेक्षा गर्ने ? देशमा गणतन्त्र स्थापना हुन्छ भन्ने कि हुन सक्दैन भन्ने ? माओवादी अध्यक्ष राजावादीहरु गणतन्त्र स्थापनाका लागि हात मिलाउन आउछन् भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने यो उहाँको ठूलो भूल हुनेछ । कांग्रेस र एमालेकै हालत माओवादीको पनि हुने प्रष्ट छ । दरवारियाहरु कहिल्यै पनि राष्ट्र सेवक र गणतन्त्रवादी हुन सक्दैनन् । उनीहरु जहिले पनि राजाको सक्रिय शासन चाहन्छन् । त्यो विगतको इतिहासले देखाइसकेको छ । यदि माओवादीले पनि आत्मालोचना नगरी यहि विचार लिएर गए भने राजा ज्ञानेन्द्रकै कित्तामा राख्दा फरक नपर्ला ।
नेपाली कांग्रेसले पनि खुलारुपमा राजाको बचाउ गर्न नसके पनि अप्रत्यक्षरुपमा स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कहिले सेरेमोनियल किङ्ग त कहिले वेवी किङ्गको कुरा गरेर राजाका अधिकारलाई संरक्षण दिने कोसिस गरेका थिए । पुत्री सुजता त अझै पनि राजा राख्नु पर्छ भनेर पार्टी भित्रै रडाको मच्चाइरहेकी छिन् । उनलाई राम्ररी थाहा हुनु पर्ने हो, जनआन्दोलन-२ राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि हो भनेर । त्यसबेला बालकदेखि बृद्धसम्म सडकमा उत्रिएर राजतन्त्रको विरुद्धमा घन्किएका नारा, आन्दोलनका बखत भएका सहिद र घाइतेहरुको पीडाले पनि उनलाई झक्झक्याउनु पर्ने हो । उनले यो कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन कि जनआन्दोलनकै बलबाट विधायिका भएर सरकारी भत्ता खाइरहेकी छन् । त्यस्ता अरु ब्वाँसाहरु पनि कांग्रेसभित्र छन्, जो आफूलाई प्रजातान्त्रिक योद्धा भनेर लोकतन्त्र माथिकै उपहास गर्दै जुर्मुराइरहेका छन् । ०४८ सालपछि सरकारमा गएर भ्रष्टाचार गरेर जनताका मुखमा लात हान्ने पनि यिनै ब्वाँसाहरु हुन् । अहिले जनताबाट तिरस्कार भइसकेपछि राजतन्त्रको पुच्छर समातेर बैतरणी तर्न खोजिरहेका, भ्रष्ट फटाहाहरुको लागि कमल थापाको रा.प्र.पा. नेपाल खुला छ त्यहिँ डुंगा तरेर गए हुन्छ कसैको टाउको दुखाइ छैन । तर लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लडेको नेपाली कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक पार्टीलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक ठाउँमा गएर लोकतन्त्रको विपक्षमा रही राजतन्त्र बलियो बनाउनु पर्छ भनी वक्तव्य दिइन्छ भने यो नेपाली जनताको भावना विपरीत त छ नै यसले सिंगो कांग्रेसलाई पनि फाइदा गर्दैन । यी केवल दरवारिया शक्तिहरु हुन् । जो अहिले अवसरको खोजिमा छन् । यदि कांग्रेसले यस्ता व्यक्तिलाई पालेर राखिरहृयो भने भोलि आफैँलाई समाप्त पार्ने छन् । त्यसैले यस्ता दरवारिया ब्वाँसाहरुलाई समयमा नै बाइपास गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लाग्नु नै कांग्रेसको हितमा छ । यस्ता दलालहरुलाई अन्तरिम बिधायिका भएर सरकारी भत्ता खाएर जनताकै विरुद्धमा लाग्ने कुनै अधिकार छैन । किनकी यो अन्तिरिम संसद भनेको जनताको बलबाट स्थापना भएको हो ।
हो, लोकतन्त्रले सबैको विरोध र सर्पोट गर्ने अधिकार दिएको छ तर कुन ठाउँमा बसेर कस्को विरोध गर्ने भन्ने हेक्का हुनु जरुरी हुन्छ । कांगे्रस भित्रका राजावादीहरुलाई पनि राजतन्त्रको सर्पोट गरेर जनताको विरोध गर्ने छुट छ तर उनीहरुलाई जनताको भाग खाएर त्यसैमा पिसाव फेर्ने नैतिक अधिकार छैन । यदि नैतिकता छ र हिम्मत पुग्छ भने सांसद पदबाट राजिनामा दिएर जनता र लोकतन्त्रका विरुद्धमा सडकमा जाओ अनि राजा बचाउन आन्दोलन गर । जनताले हेर्नेछन्, कति सम्म सफल हुनेछन् भनेर ।
ने.क.पा. (एमाले) ले खेलेको भूमिकाको बारेमा भने हामी सबैले प्रशंसा गर्नै पर्दछ । देशमा लोकतन्त्र स्थापना भए देखिनै सात पार्टीले एकतामा आँच आउन नदिन आफ्नो तर्फबाट निरन्तर प्रयास गरि रहृयो, गरिरहेकै छ । जसको उदाहरण निर्वाचन स्थगनपछि माओवादीले संसदमा प्रस्तुत गरेको गणतन्त्रको प्रस्तावमा प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेर माओवादीलाई राहत प्रदान गर्‍यो भने कांग्रेसलाई गणतन्त्रको बारेमा सोच्न बाध्य बनायो । साथै संविधानसभा निर्वाचन २०६४ साल भित्रै हुनुपर्छ भन्नेमा पनि एमाले अडिग छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि आफ्नो चौथो महाधिवेशनबाट संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो विधानबाट हटाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेर सात पार्टीको स्थानमा आफ्नो बाटो पक्का गरेको छ । यसबाट निश्चय रुपमै अब राजावादीहरुको कुनै स्थान छैन । गणतन्त्र निश्चित छ । तर संविधानसभाको पहिलो बैठकले अनुमोदन गर्ने भएकोले निर्वाचन हुनु जरुरी छ ।
More on Updates
Tags in MUSIC
विवाद गायिका गायक कन्सर्ट हल्ला ट्रयाक बाहिर उपलब्धि लुकेका कुरा रिलिज परिस्थिति अवार्ड कीर्तिमान बजारमा क्या बात ! रुचि पेज थ्री प्रेम र विवाह समुद्रपार विचार नेपाली तारा गीतकार सङ्गीतकार तातोपीरो भिडन्त
Browse all Tags in Group
Tag groups: cinema, city sightings, city updates, fashion & grooming, health, misc, music, relationship, technology, television, weird & interesting, work and office,